साहित्यिक छलफल | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 10/22/2011 - 21:06
वि.सं. २००२ मा कोसी अञ्चल, तेह्रथुम जिल्लाको सावलामा जन्मनु भएका अभि सुवेदीको साहित्यमा प्रवेश बनारसबाट प्रकाशित हुने 'नौलो पाइलो' मा वि.सं. २०१३ मा प्रकाशित 'नानी रोयो' कविताबाट भए पनि हाइकुमा चाहिँ उहाँको प्रवेश कुन सालमा भयो, उहाँ नै सम्झन सक्नुहुन्न ।
kbs — Sat, 09/24/2011 - 21:20
वि.सं. २००४ सालमा काठमाडौँको गौशालामा जन्मनुभएका ज्ञानुवाकर पौडेलको अन्य विधामार्फत् साहित्यमा प्रवेश ज्ञानेश कान्तिपुरेका नामबाट वि.सं. २०३० मा भए पनि, गजलमा प्रवेश चाहिँ २०३५ साल असारमा अभिव्यक्तिमा प्रकाशित छ शेरको गजलबाट भएको हो ।
kbs — Sat, 03/19/2011 - 19:47
कीर्तिमान कायम गर्न साच्चिकै कठिन हुन्छ । कीर्तिमान समय, घटना र निरन्तरताले पनि कायम गर्न सक्दछ । यसरी बनेको कीर्तिमान अन्ततः इतिहास बन्दछ । कुनै विगतको इतिहास भने कुनै जीवित इतिहास । सन्दर्भ मधुपर्कको हो । यसले पनि कीर्तिमान कायम गर्न सकेको छ । एउटा होइन, दुई वटा होइन । चार वटा कीर्तिमान मधुपर्कले कायम गर्न सकेको छ ।
keshu birahi — Thu, 11/18/2010 - 00:21
मेरो प्रेम किन तिमीलाई यति सस्तो लाग्यो?